Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Eduardo Camavinga Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Eduardo Camavinga na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezi na ulo, enyi nwanyi / nwunye ka ha buru, ndu na ndu nke onwe.
Na nkenke, edemede anyị na-akọwa akụkọ ndụ ya site na mbido ụbọchị, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke edemede anyị, nke a bụ nwata nwata ya na-eto eto gallery - nchịkọta doro anya nke Eduardo Camavinga's Bio.
Eduardo Camavinga Ndụ Akụkọ.
As TheGuardian akụkọ, ọ bụ otu n'ime ndị ntorobịa na-atọ ụtọ na football ụwa. N'agbanyeghị ekele a, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole gụrụla akụkọ ndụ Eduardo Camavinga dị nkenke. Ọ bụ egwu ma na-enweghị n'ihu ado, ka anyị bido.
Eduardo Camavinga Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography ndị mbido, ọ na-aza utu aha "Tacklevinga." A mụrụ Eduardo Camavinga na 10th nke November 2002 na nne ya, Sofia na nna, Celestino na Miconge, otu obodo Angola, nke dị na mpaghara Cabinda.
Ndị na-agba ọsọ French bụ otu n'ime ụmụaka ise amụrụ nye ezinụlọ ya. Ikpe ikpe site n'ile anya, ị ga-ekwenye na otu n'ime nne na nna Eduardo Camavinga (nne ya) na-ele ya anya.
Zute nne na nna Eduardo Camavinga - Sofia (nne ya) na (Celestino) papa ya.
Eduardo Camavinga Ezinụlọ:
Ndị nne na nna na-agbasi mbọ ike bụ ndị mba Congo si Angola kwaga France mgbe ọ dị naanị afọ abụọ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ nwa amaala France, Angola na Congo n'ihi na nna nna ya sitere na mba ndị a.
Ọ bụ naanị afọ abụọ ka ezinụlọ ya mere njem 6,550 kilomita site na Angola ruo France.
Mgbe nne na nna Eduardo Camavinga rutere France, ha buru ụzọ biri na Lille tupu ha akwaga na mpaghara Fougeres, nke dị naanị kilomita 40 site na Rennes.
Ọ bụ na Fougeres ka Camavinga tolitere na ụmụnne ya - ụmụnne nwoke abụọ (Sebastio, Celio) na ụmụnne nwanyị abụọ.
N'ịbụ onye tolitere na mkparịta ụka ahụ, obere Eduardo abanyeghị na football. N'oge ahụ, ọ họọrọ ịme Judo ruo mgbe mama ya mere ka ọ lekwasị anya na bọl n'ihi na ọ mebiri ọtụtụ ihe mgbe ọ na-eme egwuregwu ọgụ.
Eduardo Camavinga Nzụlite Ezinaụlọ:
Anyị ga-ekweta ebe a na midfielder anaghị ata ahụhụ n'oge ọ bụ nwata. Ezinụlọ Eduardo Camavinga nọ n'etiti ụmụ amaala nọ n'ọkwa.
N'ezie, ha bụ ụdị ndị na-eche maka mmụba nke nkasi obi ma na-ekpe ekpere megide ihe ọjọọ na-enweghị.
Eduardo Camavinga Biography - Akụkọ nke Football:
Ka ọ na-erule oge obere Tacklevinga dị afọ 7, mama ya bịanyere aka na ya n'otu ụlọ ọgbakọ dị na mpaghara, Drapeau de Fougères, ebe ọ naara nzọụkwụ mbụ ya na egwuregwu bọọlụ ọkachamara. Ọ dị mfe ịchọta ya ebe a, ị gaghị ekwenye?
Little Tacklevinga nwere obi uto na-emebi nkuzi ya nke klọb na klọb. Dị ka ya:
“N’ SLỌ AKW SKWỌ M KWES CLR CL KWES ,R I, Adabatabeghị m mkpa ọ dị izute nzukọ ahụ. N'ebe ahụ, agbara m n'ọhịa ahụ ma were njide nke bọọlụ nke ụmụaka 'nke afọ m nọ na-egwu egwu.
“Mgbalị ndị ụmụaka mere ka ha nweta bọl ahụ gosipụtara na-akụda mmụọ ka m mere ka ha ghara ịda mbà ma kpoo bọọlụ ahụ. EGO M KWU EGWU HA N'ONBỌCH MY M MBIR nke ịzụ ha. ”
Mgbe ọ nọ na Fougères, Eduardo nọrọ afọ anọ na-ewulite ike nke nchekwa nke bụzị njirimara egwuregwu ya. Ikike ya na bọlbụ na ụdị ọhụụ pụrụ iche nke ịkwanye nnabata ụlọ ikpe site n'aka ndị otu na ndị mmegide.
Mgbe ọ dị afọ 11, nne na nna Eduardo Camavinga kwadoro nnwale ya na agụmakwụkwọ Rennais, nke ọ gafere na agba na-efe efe. Ọ bụ ọrụ a rụpụtara nke mere ka ọ dịrị maka ịdị ukwuu.
You maara?… Camavinga na-egwuri egwu n'otu klọb ebe Blaise Matuidi na Ousmane Dembele nwere ntorobịa ha tupu ha etoe. Nke bụ eziokwu bụ na njem ya agaghị adị iche.
Eduardo Camavinga Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Naanị n'oge nne ya, nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị malitere ịmalite ịnụ ụtọ ọrụ ya, nke ọma nwere.
… Ọrụ Camavinga na klọb amaliteghị mgbe ụlọ ezinụlọ ya gbara ọkụ na 2013. Ọganihu ahụ bụ nnukwu ihe ndọghachi azụ maka nne na nna ya si mba ọzọ bụ ndị na-anwa ike ha niile iji gboo mkpa ha.
N'oge a na-adịghị mma, nna Camavinga kpọpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ iji nyochaa ihe fọdụrụ n'ụlọ ọkụ, ọ gwara 11 afọ na:
“Ugbu a ị bụ olileanya ezinụlọ, ọ bụ gị ga-azụlite ya.”
Na afọ 11, ọ na-eburu olileanya nke ezinụlọ ya.
N'iburu n'uche atụmanya nke ezinụlọ ya, Camavinga dere nnukwu ịrị elu site na ọkwa nke Stade Rennais. N'ezie, ndị nta akụkọ ahụ lere ya anya mgbe ọ bụ nanị 16.
Mgbe ESPN jụrụ onye bụbu onye ọkpụkpọ Rennes, Hatem Ben Arfa, ka o kwuo okwu banyere talent nke ndị nọ n'afọ iri na ụma, ọ gbanwere n'ụzọ egwu, na-arịba ama na:
“O nweghị ihe na-agaghị ekwe ya omume. Ọ dị mma na ikuku, nwere ike ịkwado, ma chebe, nyere aka na akara. Ọ mara mma, nwee ọgụgụ isi ma nwee ụkwụ aka ekpe dị ike. ”
Eduardo Camavinga Bio: Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Na Disemba 2018, onye dribbler teknụzụ binyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta mbụ ya na Les Rennais. N'ịchịkọta akụkọ izizi mbụ ọ gara nke ọma, anyị nwere ebe a; akwụkwọ ndekọ ntorobịa isii nke Eduardo Camavinga mebiri site na 90Min.
Na afọ 16, ọnwa 4 na ụbọchị 27, ọ ghọrọ nwata ọkpụkpọ egwu egwu maka otu egwuregwu mbụ nke Rennes.
Onye obere aka ekpe ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha nta gafere akara egwuregwu 50 ya na ndị otu Ligue 1 kemgbe Basile Boli - mgbe ọ dị afọ 17 na 341 ụbọchị.
Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha nta egwu bọọlụ France karịa ihe karịrị ọkara narị afọ. N'ime ime nke a, ọ tiri ihe ndekọ ahụ Kylian Mbappe, onye mere France izizi ya na afọ iri na asatọ na ọnwa atọ. Ọ bụkwa ọdụdụ akara nke otu egwuregwu France mgbe agha bisịrị.
Hụ onye mere onye mbụ ya na mba ụwa dịka afọ 17 na ọnwa itoolu.
Camavinga ghọrọ onye ọkpụkpọ izizi amụrụ ka ọnwa mbụ Jenụwarị 1 ga-egwu egwuregwu na asọmpi European ise (Spain, England, Italy, Germany na France).
Na August 2019, a hoputara ya onye ọkpụkpọ kacha nta nke ọnwa na Ligue 1. Na 16, Stade Rennais midfielder ghọrọ onye ntà mmeri na akụkọ ihe mere eme nke onye a dị iche.
Na afọ 17, ọnwa 1 na ụbọchị ise, o meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ nke ọrụ ya wee si otú a bụrụ onye na-eto eto kachasị nta na akụkọ ihe mere eme nke Stade Rennais.
N'ikpeazụ, obere aka ekpe ahụ kụrụ Guinness World Records dị ka onye ọkpụkpọ kachasị nta na akụkọ ntolite iji nye aka na egwuregwu Ligue 1.
N'oge edere Biography nke Eduardo Camavinga, ọrụ ya ka dị na mbido, na enweghị oke ihe ọ ga - enweta na Roazhon Park. Kedu ụzọ ọ bụla ọ si metụta ya, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu (gụnyere isi ya n'okpuru), ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Eduardo Camavinga's Girlfriend?
Nwa anyị nwoke na-eme ka ndị Fans nwee nganga site n'itinye anya ya naanị na bọl. Ọ dabara nke ọma na ya, ndị na-eso Njikọ French anaghị eche ma ikike nwata nwere ụmụ nwanyị.
N'agbanyeghị nke ahụ, inwe enyi nwanyị ga-eme ka Camavinga na-arịọ ndị Fans Bekee, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ chọrọ igwu egwuregwu na Premier League.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ịlele oghere a oge ọ bụla ị na-enyo enyo na bọọlụ bọọlụ na-abanye na mmekọrịta.
Hụla Eduardo Camavinga's Girlfriend?
Eduardo Camavinga Ndụ Ezinụlọ:
Talent bịara, talent na-aga, bọọlụ bọọlụ ka bụ otu. Agbanyeghị, nke a anaghị emetụta ezinụlọ. Ehapụ Eduardo Camavinga nke ezinụlọ ya ga-ahụ ya ka ọ na-ada mmụọ.
Gịnị mere ha ji dị ya mkpa? Zuo ike, anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Eduardo Camavinga. Ọzọkwa, anyị ga-eme ka eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Eduardo Camavinga Nna:
Celestino bụ aha nna Tacklevinga. Ọ na-arụ ọrụ n'ebe a na-egbu ezì na Saint-Brice-en-Coglès maka ọtụtụ ihe egwuregwu nwata.
Mgbe ụfọdụ ọ naghị ehi ụra n'ụlọ n'ihi oke egwu nke Job ya. Celestino siri ike otú ahụ.
Na agbanyeghị, o wepụtara oge maka ezinụlọ ma nwee okwukwe na Camavinga nwere ike ịbụ bọọlụ bọọlụ ọ bụ taa.
Banyere Eduardo Camavinga nne:
Sofia bụ onye nwe ụlọ na nke na-adọrọ mmasị na nke ahụ. Ndị mgbasa ozi na-enye ohere dị ukwuu maka iduzi uche Camavinga site na Judo ruo bọọlụ.
Wa bọọlụ agabeghị ọhụụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ọka ikpe Judo. Taa, nne na nna Eduardo Camavinga na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ha.
Banyere Eduardo Camavinga ibmụnne:
Maestro nke dị n'etiti etiti nwere ụmụnne anọ, mana ọ bụ naanị abụọ ka a ga-amata. Ha gụnyere nwanne ya nwoke nke okenye Sebastio na nwanne ya nwoke nke nta Celio.
Dị ka Camavinga, Sebastio nwere mmasị na Judo mana ọ gbanwere football. Ya na nna Camavinga na-agba bọl na-amakarị. Ka ọ dị ugbu a, amabeghị ụmụnne ndị ọzọ nke Eduardo, kpọm kwem ụmụnne ya ndị tọrọ ya.
Lee Camavinga ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Sebastio.
Banyere Eduardo Camavinga Ndị ikwu:
Zutela onye òtù ezinụlọ nke onye ọkpụkpọ na-abụghị nne na nna ya na ụmụnne ya (ndị ezinụlọ ya)? Anyị enweghịkwa. To gaghị echegbu onwe gị.
O nwere ike ọ gaghị ewe oge tupu ya ekpughe ndị nne na nna ya na nne na nna ya. O nweghịkwa ihe ndekọ banyere nne na nna ya, nwanne nna ya, ụmụnne ya na ụmụ nwanne nna ya agaghị agbanahụ ebe nrụọrụ weebụ ruo mgbe ebighị ebi. Anyi atụkwasikwa obi ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya obi ike ịmata ya n'oge na-adịghị anya.
Eduardo Camavinga Ndụ Nke Onwe:
Anyi nwere ụfọdụ eziokwu iji pụta ihe n'onwe anyị gbasara agwa Eduardo Camavinga. Ha gụnyere ịdị umeala n'obi ya, ilekwasị anya na ntozu okè.
Ọ bụ onye maara mgbe ọ ga-amụmụ ọnụ ọchị na mgbe ọ ga-ezobe ndị ọcha nke mejupụtara ọnụ ọgụgụ eze ya.
Ọzọkwa, Camavinga na-ege egwu nke ukwuu ma nwee ihe maka iso ụmụnne ya egwu egwuregwu vidio.
Ọ bụ nnukwu na egwu egwuregwu. Nwere ike ịhụ onye na-acha anụnụ anụnụ n’okpuru?
Eduardo Camavinga Web Ndụ:
Anyị anaghị edozi ihe mgbe ịdị umeala n'obi ruru na ndepụta anyị nke agwa onwe onye Camavinga. Lee ihe kpatara ya. O nwere ihe ruru 500,000 Euro dị ka nke November 2020 mana ọ ka bi n'ụlọ nne na nna ya.
Anyị na-atụ anya na onye na-eme egwuregwu na-enweta € 12,000 kwa izu na € 625,000 kwa ọnwa kwesịrị igosi ọzụzụ na ezigbo ụgbọ ala?
Otú ọ dị, Anyị ka na-ahụ ya ka ọ gbanye ụgbọala na ụlọ. O nwere ike ịbụ na ọ na-enweghị njikọ na eziokwu ahụ na ya na nne na nna ya na-achọ ịhụ ka ọ na-elekwasị anya na ịkwalite egwuregwu ya. Ànyị nwere ike ikwubi na ọ bara ọgaranya n'ụzọ na-enweghị isi? Ee, anyị nwere ike.
Eziokwu Banyere Eduardo Camavinga:
Iji kechie ihe a dị egwu banyere akụkọ nwata na akụkọ ndụ Tacklevinga, lee ihe banyere ya.
Eziokwu # 1 - Emir nke Qatar n’okpuru okwu ya:
Edu nke Eduardo Camavinga agbabeghi na onye nwe PSG. Dabere na Footmercato site na Leparisien, Ọfụma Camavinga jidere anya Emir nke Qatar.
Tamim bin Hamad Al Thani O yiri ka ọ nọ n'okpuru okwu ya ma kwe nkwa ime ka PSG kwadebe maka nnukwu iwe na oge mbufe 2021.
Eziokwu # 2 - rygwọ ọnwa na ego kwa nke abụọ:
Kwa Afọ: € 625,000.
Ọnwa kwa: € 52,083.
Kwa Izu: € 12,000.
Kwa :bọchị: € 1,714.
Kwa elekere: € 71.
Nkeji nkeji: € 1.18.
Sekọnd: € 0.02.
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Eduardo Camavinga'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 3 - Eduardo Camavinga Okpukpe:
A na - akọ na onye na - agbachitere agbachitere bụ onye okpukpe, mana ọ na - eche n'echiche anyị banyere otu ọ naghị esi gosipụta akụkụ ahụ nke ndụ ya na mgbasa ozi. N'agbanyeghị nzọ anyị dị na ya ịbụ Onye Kraịst.
Eduardo Camavinga nwere ikike nke 89 kụrụ nke nke N'Golo Kanté onye nwere 88 nye aha ya. Ọ bụ onye na-eme egwuregwu zuru ezu na otu n'ime ndị na-eto eto kachasị elu na egwuregwu vidio egwuregwu.
Ọ bụghị ihe ọjọọ ma enwere ike ịmeziwanye.
Ịghọ Onye ntà kacha nwee goolu nke mba France n’ihe karịrị otu narị afọ n'ezie na-eme ka ọ bụrụ kpakpando zuru oke nke French football. Nye ụfọdụ Fans, ọ bụ onye ọkpụkpọ e weere na ọ ka mma karịa Paul Pogba.
Ihe ndekọ ndụ anyị nke Eduardo Camavinga na-akụziri anyị na nrụgide "ikike" nwere ikike ịmepụta dayamọnd. Nke a bịara doo anya site na nzaghachi ya mgbe ọkụ gbara ụlọ nne na nna ya.
Ndị ezinụlọ Eduardo Camavinga (ọkachasị papa ya) mere ka ọ ghọta na ọ bụ olileanya nke ezinụlọ ya. Obi dị m ụtọ na nwata ahụ biri ndụ dị ka atụmanya ahụ.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja Sofia na Celestino maka inye ya ọzụzụ ziri ezi nke gosipụtara ugbu a na ike ya.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inweta akụkọ nwata na izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n ’ịhụ ihe ọ bụla na - adịghị mma, kpọọ anyị.
Ma ọ bụghị ya, hapụ otu echiche gị banyere ihe ngosi Rennes. Maka nchịkọta Eduardo Camavinga's Bio, jiri tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Eduardo Camavinga.
aha otutu: "Tacklevinga."
Age: Afọ 18.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị asaa nke ọnwa Nọvemba 10.
Ebe amụrụ onye: Miconge na mpaghara Cabinda nke Angola.
Ogo n'ogo: 6 etkwụ.
Elu na Cm: Udo 183 Cm.
Egwuregwu Ọnọdụ: Onye etiti.
Ndị nne na nna: Sofia (nne), Celestino (nna).
Ụmụnne: Sebastio (nwanne nwoke nke okenye) na Celio (nwanne nwoke nke obere) na ụmụnne nwanyị abụọ.
Ihe omume: Na-ege egwu na egwu egwuregwu vidio.
Ezigbo Net: £ 500,000.
Federico Valverde Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu